Waaheen Media Group » RIBADA ILAAHAY AYAA XARRIMAY Maxamed Axmed Faarax (Foud) foudfarah@yahoo.com
Browse:Home Articles RIBADA ILAAHAY AYAA XARRIMAY Maxamed Axmed Faarax (Foud) foudfarah@yahoo.com	RIBADA ILAAHAY AYAA XARRIMAY Maxamed Axmed Faarax (Foud) foudfarah@yahoo.com
Comments Off on RIBADA ILAAHAY AYAA XARRIMAY Maxamed Axmed Faarax (Foud) foudfarah@yahoo.com	Caado iima aha inaan maqaalo ku soo qoro wargeysada. Laba maqaal oo hore ayaan jiray oo aan mid ku qoray Jamhuuriya: “Diinta Islaamka iyo Dastuurka Somaliland”. Waxaan ugu jawaabayey Wasiiradii Dawladii Riyaalemid ka mid ahaa oo ka yidhi BBC waxaanu nahay dawlad Cilmaani ah. Maqaalka kale oo shan wargeys qoreen wuxuu ku saabsana dagaalkii Kalshaale “Colaad Nabad Laguma Doorsado”.
Maanta waxaa ii geeyey mooshinka ay wataan koox yar oo Golaha Wakiilada ka tirsan oo muddo dheer u ololaynaayey, dan kasta haka lahaadeen, inay Diinta Islaamka iyo Dastuurka Somaliland ay ku tuntaan oo bangiyo Ribo ah keenaan dalka. Waxa Golaha Wakiilada Sabtidan la horkeenayaa saddex Ajande oo uu ka mid yahay ka Ribadu. Sida la xaqiijiyey labada kale dood ayaa la gelinaya, ka Ribada waxa lagu talo jira inaan laga doodin ee cod loo qaado si Ummada loo khiyaameeyo oo iyadoo aan cidina ogayn looga ansixiyo Golaha. Mudo dheer ayey kooxdaas aan dadka iyo dalka midna u tudhayni mashruucaas wateen oo ay u suurageli weyday inay Golaha soo hordhigaan iyadoo shacbigu ka hor yimid iyo iyadoo Allaah ha innoo barakeeye culimada Somaliland arrintaas mawqif adag oo midaysan iska taagtay.
Waxa ugu dambeeyey sannadkii dhawa oo markay u suurageli weyday ay culimada innoo haya dhaxalkii Rasuulku (SCW) ay aflagaadeeyeen Xildhibaanada qaar ka mid ahi.. Maxay haddaba tahay Ribadu? Haddaan soo koobo Ribada semenkan aan joogno waa lacag dulsaar ku ah lacag aad ka deynsatay bangi. Lacagtaas dulsaarka ah oo laga yaabo muddo sannado ah inaad ku bixiso. Haddaad bixin kari waydana wixii lagu iibiyey lagaala wareego. Haddaad lacag amaahatayna hantiddii maguuraanka ahayd ee aad dammaanada u dhigtay lagaa xaraasho. Waa dhiigmiiradnimo koox yar oo bangiyada lihi ku taajiraan, dadka inta kalana addoomo u yihiin. Maxaa haddaba diintu ka qabta Ribada? Ribadu Ilaahay (SWT) ayaa ka xarrimay ummadihii inaga horreeyey iyo ummada Nebi Muxammadba (SCW). Si Cad ayaa Quraan iyo Sunnada Rasuulku (SCW) Ribada laynooga xarrimay. “Kuwa cuna Ribada kama soo istaagayaan (Quubuurahooda) si aan ahayn sidduu isu taago mid la dhacdhici shaydaan taabashadiisa (Shaydaan galay) waxaana ugu wacan arrintaas inay yidhaahdeen beecu (Gadashadu) waa sida Ribada.
Wuu baneeyey Allaah beeca (Gadshaada) wuxuuna xarrimay Ribada…” (Al-Baqarah: 275). Allaah (SWT) wuxuu si adag uga digay oo dagaal cad u yaboohay cidda Ribada ka tegi wayda: “Kuwa xaqa rumeeyow ka dhawrsada Allaah kana taga waxa hadhay oo Ribo ah haddaad mu’miin tihiin. Haddaydaan sidaas yeelin ogaada dagaal Alle iyo Rasuulkiisa…” (Al-Baqarah: 278-279). Rasuulku (SCW) axaadiis badan ayuu innoogu diiday Ribada. Waxa ka mid ah: 1. Xadiiska Abii Hurayrah (RLC) werinayo wuxuu Rasuulku (SCW) yidhi: “Ka fogaada toddoba lagu halaagsamo” Waxa lagu yidhi waa kuwama Rasuulkii Allow? Wuxuu yidhi “Ilaahay oo wehel loo yeelo, Sixirka, Naf lagu dilo si aan xaq ahayn, cunida Ribada, Cunida xoolaha Aggoonta, haweenka dhawrsoon oo xumo (Sino) lagu beenabuurto” Bukhaari iyo Muslim
2 .Xadiiska uu werinayo Cabdullaahi Ibnu Mascuud (RLC): “Nebigu (SCW) wuxuu nacdalay Riba cunaha, ka cunsiinaya (Bixinaya), labada markhaatiga ah iyo labada qoraysa” Shanta ayaa weriyey waana Xadiis Saxiix ah. Nacadasha Nebiguna (SCW) waa naxariista Allaah oo laga dheereeyo.
3. Xadiiska Cabdullaahi Binu Xandalah saxaabigii markuu shahiiday isagoo Jinaaba qaba ay meytkiisii maydhay Malaa’gtu wuxuu ka weriyey Rasuulku (SCW) innuu yidhi: “Dirham (Dollar) Ribo ah oo qofku cuno isagoo ogg wuxuu ka dembi daran yahay saddex iyo lixdan jeer oo la sinaystay”Axmed waana Xadiis Xassan ah.
4. Xadiis dheer oo Samrata Binu Jundub ka weriyey arrimo dhawr ah oo Rasuulka (SCW) riyo lagu tusay waxa ka mid ahaa in la tusay Rasuulka (SCW) Ribo cunaha oo tog dhiig ah ku dhex jira.
5. Xadiiska Al Baraa Binu Caasib ee yidhi Rasuulku (SCW): (Ribadu waa laba iyo Toddobaatan nooc ta ugu fududi waa ninka oo hooyadiis ka sinaysta” Sheikh Albaani ayaa saxiixiyey. Muxuu ka qaba Dastuurka Somaliland Ribada? Qodobka shanaad ee Dastoorka Somaliland wuxuu ka hadlaya Diinta, waxaanu qoraya sidan:
1. Diinta Qaranka Somaliland waa Diinta Islaamka; waxaana geyiga Somaliland ka reban faafinta Diin aan ahayn Diinta Islaamka.
2. Xeerka Dalka waxa laga qaadanaya Shareecada Islaaamka. Waxa reeban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda.
3 .Dawladu waxay ogaysa Shacaa’irta Diinta Islaamka waxaanay fulinaysa Axkaamta Shareecada. Sidoo kale waxay ka hor tegaysa fusuqa iyo anshax-xumada.
4. Tirsiga taariikhda waxa laga raacaya tan Islaamiga ah ee Hijriyada iyo tan Miilaadiyada ah. Hadda iyo jeer dhibaatada iyo belaayada waxa dadka intiisa badan u horseeda qof ama koox yar oo ujeedo gaar ah wadata oo ay tahay in Shacbigu idho dheer u yeesho. Koox sagaal qof ka kooban oo Reer Thamuud ahaa ayaa isku dayday in goor habeen dilaan Nebi Saalax iyo ehelkiisa kaddibna ugu dhaartaan tolkiis in marka dilku dhacay aanay meeshaba joogin.
Kooxdan Wakiilada ka tirsan sida kooxdaas Reer Thamuud waxay rabaan inay halaaga iyo fasaadka innoo horseedaan xiligan adag ee aan abaaraha iyo sicir bararka ku jirno. Xiligan ay xoolihii madheen ee dadkii khatarta ku jiro. Xiligan dhoofintii adhigu joogsatay. Xiligan ay ahayd in Ilaahay (SWT) aan si caam ah ugu toobad keeno, barino oo isu dhuldhigno oo aan macsi oo dhan ka fogaano si Ilaahay (SWT) naxariistiisa innoo siiyo..
Haddii kooxdaan iyo cidda ka dambaysa aan isku sii dayno maxaa ka dhalan kara? 1. Haddii la ansixiyo Ribada waxa shaki ku jirin in Ilaahay dagaal cad inagu qaado. Dagaalku wuxuu noqon kara duufaan, daadad, dab, daacuun, dagaal sookeeye ama beelooyin kale. Ciqaabta iyo cadhada Allaah (SWT) ee ka dhalata Aayadahaas Quraanka ah iyo Axaadistaas oo si toos ah looga horyimaado kuma ekaanayso kooxda wadata oo keliya waa mid ina wada sammayn karta. Allaah wuxuu “Ka dhawrsada Fitno oon dhacayn kuwii dulmiga falay oo idinka mid ah gaar ahaan” (Al-Anfaal: 25)
2. Nicmooyinka aan la koobin karin ee Ilaahay (SWT) inagu manaystay haddaan halkaan ka mahadcelin lahayn aan Ribo oggolaano aan sugno ILaahay (SWT) fakhri iyo gaajo innoo bedelo. Allaah (SWT) wuxuu innoo sheegay: “Allaah wuxuu tirtira Ribada wuxuuna badiya (Barakeeya) Sadaqooyinka” (AL-Baqarah: 276) Bangiyada dalalka Reer Galbeedku waxay hadda waxa kasta oo deyn lagu qaadanayo oo aan guryaha ka ahayn ka joojiyeen lacagtii dulsaarka ahayd (0% interest). Taasna waxa khasbay markii dadkii dulsaarkii Ribada khatyaan ka joogsadeen . Labaatan sannadood ka hor markii dhaqaalaha dalalka reer Galbeedku dhulka galay ayaa Bangiga ugu Swizerland cilmi baadhis ku sammeeyey arrintaas.
Waxa Bangigu soo saaray oo jaraa’idka lagu qoray in haddii Reer Galbeedku dooaya inaanay dhici aafadii dhaqaale oo kale ay dersaan oo qaataan nidaamka dhaqaalaha Islaamka ee aan Ribada ku salaysnayn. Waxa aad u batay bangiyada Islaamiga ah laga furay Europe iyo North America.